डा. देवकोटालाई उनकै अस्पतालको प्रा‌ंगणमा अन्तिम श्रद्धासुमन (तस्बिरहरु)- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सोमबार निधन भएका प्रख्यात स्नायु शल्यचिकित्सक प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटालाई उनी आफैंले स्थापना गरेको अस्पतालमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइँदै छ । केही समयदेखि पित्त नलीको क्यान्सरबाट पीडित ६५ वर्षीय देवकोटाको उपचारका क्रममा सोमबार साँझ ५.३५ बजे बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा नै निधन भएको थियो ।
प्रकाशित : असार ५, २०७५ १२:०५
डा. देवकोटा बेलायतस्थित किंग्स अस्पतालमा ६ महिना उपचारपछि स्वदेशमै देहत्याग गर्ने इच्छाअनुसार गत वैशाख १५ गते मुलुक फर्किएका थिए । उनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्घाञ्जलीका लागि मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म न्युरो अस्पतालमा राखिएको छ ।
डा. देवकोटालाई श्रद्घाञ्जली दिन हिजै साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल पुगेका थिए । उनलाई श्रद्घाञ्जली दिन आज बिहानैदेखि न्यूरो अस्पतालमा परिवार तथा उनका शुभेच्छुकहरुको भिड लागेको छ ।
अस्पतालमा श्रद्घाञ्जली दिइएपछि उनको शवलाई नारायण गोपाल चोक, रिंगरोड हुँदै पशुपति आर्यघाट पुर्‍याई विद्युतीय माध्यमवाट दाहसंस्कार गरिने न्यूरो अस्पतालले जनाएको छ ।
उनको काजकिरिया हेपाली हाइटस्थित निवासमा श्रीमती मधु दीक्षित देवकोटा र छोरीहरु मेघा, वसुधा र मञ्जरीले गर्नेछन् । परिवारका अनुसार काजकिरिया ७ दिनमा सकिने छ ।